China i-acrylic Mirror Sheets mveliso kunye nabathengisi | IsiDonghua
Ukuxhamla ekubeni lula, impembelelo, ukumelana nokuqhekeka, ukubiza okungabizi kakhulu kunye nokuqina ngakumbi kuneglasi Iphepha lesipili le-acryliczingasetyenziswa njengenye indlela kwizipili zemveli zeglasi kwizicelo ezininzi nakwimizi-mveliso. Njengazo zonke ii-acrylics, zethuisipili se-acryliciimakhishithi zinokunqunyulwa ngokulula, zigrunjwe, zenziwe kwaye zenziwe nge-laser. Iimakhishithi zethu zesipili ziza ngemibala eyahlukeneyo, ubukhulu kunye nobukhulu, kwaye sibonelela ngokusika kwisayizi esipilini.
Igama lemveliso Cacisa i-acrylic isibuko se-plexiglass iphepha
Umbala Icacile, isilivere
Iimakhishithi zethu zesipili ze-acrylic zilungele uluhlu olubanzi lwezicelo. Zininzi izinto eziqhelekileyo ezisetyenziswayo, eyona ndawo ithandwayo yindawo yokuthengisa / indawo yokuthenga, umboniso wentengiso, imiqondiso, ukhuseleko, izithambiso, ulwandle, kunye neeprojekthi zezithuthi, kunye nefenitshala yokuhombisa nokwenza ikhabhathi, iimeko zokubonisa, i-POP / ivenkile / izixhobo zokugcina, ukuhombisa kunye noyilo lwangaphakathi kunye nokusetyenziswa kweeprojekthi ze-DIY.
Cacisa i-Acrylic Mirror
izibuko ze-acrylic sheet
isilivere ye-acrylic mirror
isilivere yesilivere ye-acrylic